सडक महोत्सबमा आन्तरिक पर्यटकलाइ २० प्रतिशत छुट - पराजुली - Pokhara News
सडक महोत्सबमा आन्तरिक पर्यटकलाइ २० प्रतिशत छुट – पराजुली
on: प्रकाशित मिति : पुष ७, बिहीबार - २०७३ , समय १७:३३
भरत राज पराजुली – अध्यक्ष, पश्चीमान्चल होटल संघ पोखरा
सडकमै खाऔ, सडकमै नाँचौ, सडकमै रमाऔ भन्ने मूल नारा बोकेको सडक महोत्सव यहि पुस १३ गते देखि १७ गते सम्म पोखराको लेकसाइडमा संचालन हुदैछ । सडक महोत्सबमा प्रतक्ष्य अप्रत्यक्ष रुपमा पोखराका ब्यबसाय तथा संघ सस्थाहरु जोडिने गर्दछन । महोत्सबमा आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाइ स्वागत गर्ने स्थान भनेको उनीहरु बास बस्ने थलो अर्थात होटलहरु हुन् । भनिन्छ “फस्ट इम्प्रेसन इज लास्ट इम्प्रेसन” होटलले गर्ने आतिथ्य सत्कारले पर्यटकको मनमा जुन छाप छाड्छ त्यसलेनै पोखराको परिचय जनाउने गर्दछ । यसै सन्दर्भमा सडक महोत्सबको बारेमा होटलको तर्फवाट धारणा बुझ्न हामीले पश्चिमान्चल होटल संघका अध्यक्ष भरत राज पराजुली संग गरेको कुराकानीको छोटो अंश यहाँ प्रस्तुत गरेका छौ ।
१८ औ सडक महोत्सबको मिति नजिकिदै छ , यसमा तपाइँहरुको साथ समर्थन कस्तो छ ?
हो, सडक महोत्सव हाम्रो आगनमा आइसकेको छ । हामी पाहुनालाई स्वागत गर्न पूर्ण तयारी अवस्थामा रहेको छौ । सडक महोत्सबको आयोजक रेवान पोखरा भएतापनि यसको सह आयोजक पश्चिमान्चल होटल संघ भएको हामीले महशुस गर्ने गरेका छौ । आएका अतिथिलाई स्वागत गर्ने पहिलो ढोका भनेको नै होटलहरु हुन् । त्यसकारण पनि यो महोत्सबको सबैभन्दा बढी चासो हामीलाई हुने गर्दछ । हामीहरु कसरी महोत्सबलाइ सफल पार्ने भनेर लागिपरेका छौ ।
महोत्सबमा आउने पाहुनालाइ आकर्षित गर्ने के गर्दै हुनुहुन्छ ?
हामीले बढी भन्दा बढी आतिथ्य सत्कारमा जोड दिनेछौ । होटलमा बसुन्जेल हामिहरुले उहाहरुको सेवा सुविधामा कुनै कमि आउन दिनेछैनौ । साथै हामीले महोत्सबको अवसरमा पोखरा पाल्नुहुने आन्तरिक पर्यटकलाइ होटल रुममा २० प्रतिशत छुट दिने घोषणा पनि गरेका छौ ।
छुटको घोसणा गरिन्छ तर पैसा लिनेबेला बढाएर लिने गरिन्छ भन्ने गुनासो छ नि, किन ?
हो, यस्तो गुनासो हामीले पनि सुनेका छौ । बिशेष गरि होटल संघ भन्दा बाहिरका केहि गैह्र सदस्यहरुको मौकामा चौका हान्ने प्रबृत्तिका कारण यस्तो समस्या आएको हो । यसपाली हामीले अनुगमन समिति पनि बनाएका छौ । यदि कोही कसैले यस्तो गरेको जानकारी हामीले पाएमा अथवा गराएमा हामीले कालोबजारी एन अन्तर्गत कारवाही गर्नेछौ ।
होटल बुकिङ्गको अवस्था कस्तो छ ? पर्यटकहरु कति संख्यामा आउने अनुमान गर्नुभएको छ ?
महोत्सबको लागि अझै केहि समय छ । आन्तरिक पर्यटकहरुले बुझ्ने क्रम जारिनै छ । अहिलेसम्म ३० प्रतिशत जस्तो बुकिङ्ग भइसकेको छ । पर्यटकको संख्यामा गतसाल भन्दा ३० प्रतिशतले वृद्धिहुने अनुमान गरेका छौ ।
यसपटक विगतका वर्षहरुमा भन्दा फरक ठाउमा महोत्सब हुदैछ, अप्ठ्यारो छ कि ?
बिशेष कारणवश यो पटक महोत्सब कोमागाने पार्कमा आयोजन हुदैछ । विगतका वर्षमा भन्दा आयोजकलाई महोत्सब स्थल सजिसजावट तथा ब्यबस्थापन पक्ष केहि खर्चिलो हुने भएतापनि दर्शक एबम पाहुनाहरुले भने भरपुर मनोरन्जन लिन पाउनुहुनेछ । देश बिदेशका सांगीतिक प्रस्तुतिका साथमा नयाबर्ष, क्रिसमस जस्ता चाडवाडमा रम्नको लागि म होटल संघ तथा व्यक्तिगत तर्फवाट समस्त आदरणीय नेपाली आमा-बुवा, दाजु-भाई, दिदी-बहिनीलाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछु ।
पराजुली होटल पिस प्लाजाका संचालक समेत हुन् ।
प्रस्तुति – गणेश बराल